Ny sasany mandrehitra ny olana amin'ny tranokala amin'ny Semper Expert
Nandritra ny taona vitsy lasa, ny ekipa mpanohana an'i XBMC dia nahatsikaritra izany Ny mpanjifa dia mampiasa ny endriky ny fandaminana ny media sy ny data automatique. Raha tso-po, XBMC dia tsy manana olana amin'ny fandaharana izay efa nampiasanao hitazonana ny fampahalalam-baovao sy ny sarimihetsika sarimihetsika. Ho an'ny fampahalalanao, ny fahafahana mandamina ny tahirin-tsarimihetsika dia ny XMBC no singa lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny varotra.
Ho an'ny mpandrindra, tranokala iray dia sora-baventy izay mamoaka ny angona momba ny fampitam-baovao sy ny lahatsary tianao indrindra avy amin'ny toerana tiany sy manan-danja, ary maniraka any aoriana ny fampahalalana amin'ny XBMC. Ho an'ny mpampiasa tsy mivadika izay mbola tsy nahatsikaritra azy, ny XBMC dia ahitana ny tranokala fananganana tranokala izay manangona ny fampahalalam-baovao sy ny sarimihetsika amin'ny sarimihetsika mifanaraka amin'ny filànao.
Mazava ho azy, ny XBMC dia manadio sy manavao ireo fanodinkodinam-pandrafetana tranokala natao hanompoana ireo mpanjifa mahatoky. Raha toa ka misy ny filàna, ny XBMC dia nampidiriny ihany koa ireo endri-javatra vaovao mba hanampiana ireo mpilalao sarimihetsika filma hahafantarana ny fanatanjahantena ary rakotra haingana. Mba hampandrenesana ny tranonkalan'ny tranokala natao amina tranokala sy ny tahirin-kevitrao dia mandehana amin'ny safidin'ny 'Set Content' ary manaiky ny fepetra sy fepetra vaovao.
Ahoana ny fandefasana ireo tranokala filma ao amin'ny nfo files
Maro ny mpampiasa tsy mivadika no nampiasa mpitantana nfo mba handaminana ny safidin'ny media. Moa ve ianao miasa amin'ny fananganana backup ny sary sy ny metadata misy anao? XBMC manohana tanteraka an'io safidy io.
Raha te hanondrana ny tranokala tianao indrindra amin'ny nfo files ianao, tsindrio ny 'Export Video Library' eo amin'ny 'Settings vidéo'.
Ampitao amin'ny tahiry XBMC
Ny XBMC dia ahitana vondrom-piarahamonina mifototra amin'ny aterineto izay ahitana ny mety sy ny fampiasana azy. Ny birao XBMC dia miasa amin'ny famporisihana ny mpampiasa hampita anjara amin'ny sarimihetsika ankafiziny indrindra, sary ary fampisehoana andavanandro. Ny vavahadin'i XBMC amin'izao fotoana izao dia ahitana lahatsoratra sy harena manankarena, noho ny mpanjifa mahatoky.
Ny XBMC dia ahitana mpiasan'ny tambajotra an-tserasera izay manome tolotra toro-hevitra ho an'ny mpitoraka blaogy sy ny mpampiasa farany. Na izany aza, afaka manampy amin'ny fitazomana ny tranonkala XBMC ianao raha manana ianao
Azonao atao koa ny manampy amin'ny fanitsiana ny olana. amin'ny fampiasana ny lesona ao amin'ny XBMC Wiki sy ny mpandika lahatsoratra amin'ny endriny. Ho an'ireo mpampiasa za-draharaha, ny fampiasana tranokala iray hanapariahana sary mahavariana dia asa mora atao. Na izany aza, ny traikefa dia mety hikorontana ho an'ny mpanaraka. Ampitao ny fahaiza-manaonao sy ny toro-làlana mba hamonjena ireo mpandray anjara amin'ny fanondrotana an-tserasera.
Mitana anjara toerana manan-danja amin'ny fanampiana ireo mpitoraka bilaogy sy mpankafy sarimihetsika amin'ny tranonkalan'ny mpirotsaka. Ny mpandroba dia mamela ny mpilalao horonana amin'ny horonan-tsarimihetsika sy ny horonan-tsarimihetsika tsy misy fihaonana. Aza avela handamina ny tetikasanao an-tserasera ny fitantanana ny angona. Azonao atao ny manamboatra tranokala vohikala mba hahazoana angona izay hahafeno ny filan'ny mpanjifanao sy ny mari-pamantarana. Azonao ampiasaina ihany koa ireo endri-javatra mahery vaika amin'ny XBMC mba handaminana sy hitantanana ny antontan-kevitra momba ny programa Source .